22 NOVEMBRE RAZAFINDRAHETY : HIC-ET-HIAKA
22 NOVEMBRE RAZAFINDRAHETY
Ny 22 novembre 1861 no teraka Razafindrahety, izany hoe 156 taona raha velona teo. Mpanjakan’i Madagasikara nitondra ny anarana Ranavalona III izy nanomboka ny 22 novembre 1883 hatramin’ny 1897. Izy no Mpanjaka farany fa lasa zanatany frantsay i Madagasikara.
Ny 23 mai 1917 izy no niamboho tao Alger.
Misy tantara milaza fa niteraka zazavavy iray Ratrimoarivony sy Razafindrahety. Tsy fantatro hoe aiza ho aiza no tsy mitombina satria i Louise Ravoninoro Ranavalozafimanjaka izay ambara fa zanany dia teraka tamin’ny 1878 tao Faravohitra, Antananarivo. Tamin’ny 17 juillet 1897 izy dia nanambady an’i Rainizoely Andriambahoaka Ratsimihara Nanet’s Granville, prince d’Ecosse, zanaka tera-tany écossais, nataon-dRanavalona II ho Andriana (anobli). Niteraka maro ry zareo, anisan’izany Angèle, Désiré, Georges, Johnson, Meltine, Julie ary Jules. Maty tamin’ny 1921 ilay vadiny, i Loouise kosa maty tamin’ny 1947.
Tsara ny manamarika fa misy Marie-Louise iray hafa koa, dia i Marie-Louise Razafinkeriefo (Razafinkarefo), izay teraka tamin’ny 1897 tany amin’ny États-Unis. Ny printsesy Rasendranoro, rahavavin-dRazafindrahety dia nanana zanaka lahy natao hoe Henri Razafinkarefo. Izy io dia nanambady an’i Jennie Maria Waller, zanak’i John Lewis Waller, amerikana mainty voatendry ho consul des USA teto Madagasikara tamin’ny 1891. Tamin’ny 1894 raha nihomankomana hanjanaka tanteraka an’i Madagasikara ny Frantsay, dia nisambotra ny rain’i Jennie izay notondroiny ho mpanao asa fitsikilovana. Fotoana fohy taorian’izay, 1895, dia novonoin’ny troupes coloniales i Henri Razafinkarefo, vadin’i Jennie, izay 15 taona, nitondra vohoka. Niala teto Madagasikara i Jennie sy ny reniny ary ireo anadahiny, nody tany Amerika ary tany Washington izy no niteraka an’ Andriamanantena Paul Razafinkarefo, na Andy Razaf, ilay mpiangaly jazz malaza. Tamin’ny taona 1897 i Jennie, dia niteraka zazavavy kely nampitondrainy anarana hoe Marie-Louise Razafinkeriefo, izany hoe anabavin’i Andy Razaf, na dia tsy zanak’i Henri Razafinkarefo intsony aza … Maty tany USA tamin’ny 1948 i Marie-Louise Razafinkeriefo.
Tohin’ny tantaran-dRazafindrahety : tamin’ny 23 septembre 1938 no noloarana ny taolambalony ary nentina namonjy ny seranan-tsambon’i Toamasina tamin’ny sambo « Ville de Reims ». Tonga teo Antananarivo tamin’ny fiaran-dalamby manokana ny tranovorona tamin’ny 30 octobre 1938.
Razafinandriamanitra III zana-drahavavin-dRazafindrahety, milevina ao Saint-Denis de La Réunion
Ramasindrazana, nenitoan-dRazafindrahety, maty tany Nice tamin’ny 1924, ary milevina ao
Rasendranoro, rahavavin-dRazafindrahety, maty tao Alger teo amin’ny faha-41 taonany, ary milevina any
Marie-Louise Razafinandriamanitra, milevina ao Montreuil